सन्दिपलाई नखेलाएको दिल्लीको फितलो ब्याटिङ , पंञ्जाबलाई दियो मात्र १५८ रनको लक्ष्य ! यो जित कस्को ? |
२०७७, ४ आश्विन आईतवार २१:४५ September 20, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा आज दिल्ली क्यापिटलले किंग्स इलेभेन पंजावलाई १५८ रनको लक्ष्य दिएको छ ।टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै १५७ रन बनाएको हो । खराब शुरुवात गरेको दिल्लीले शुरुको चार ओभरमा नै आफ्ना महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएको थियो । दिल्लीका पृथ्वी शा ५ रनमा शिखर धवन शुन्यमा र शेमरन हेटमेयर ७ रन बनाएर आउट भएका थिए ।
त्यसपछि कप्तान श्रेयस अय्यर र रिषव पन्तले ७३ रनको साझेदारी गर्दै दिल्लीलाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएका थिए । श्रेयसले ३९ रन बनाए भने रिषव ३१ रन बनाएर आउट भए । त्यस्तै मार्कोस स्टोइनिसले अन्त्यमा उत्कृष्ट ब्याटिंग गर्दै २१ बलमा ५३ रन बनाएका थिए भने अक्सर पटेलले ६ र आर आश्विनले ४ रन बनाए ।
पञ्जाबका बलर मोहमद सामीले ३ विकेट लिएका थिए । सामीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ ओभरमा केबल १५ रन दिएर ३ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै शेल्डन कोट्रेलले २ विकेट लिए भने रवि विस्नोई एक विकेट लिएका थिए । दिल्लीले एक विकेट रनआउटको रुपमा गुमाएको थियो । यस खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई भने दिल्लीले अवसर दिएको छैन ।